Wislawa Szymborska: onye bụ onye na akwụkwọ ndị o dere | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Wislawa Szymborska Iyi: the2banks
Wislawa Szymborska Ọ bụ otu n'ime ndị na-ede uri kacha mara n'ụwa, n'agbanyeghị eziokwu, na 1996, ọ ritere Nobel Nrite maka Akwụkwọ. O di nwute na anyi agaghi enwezi ike itukwasi obi banyere onu ya, ebe obu na o nwuru na 2012, ma oru ya na-aga n’ihu na oge na adighi anya.
Ma, Ọnye na-bụ Wislawa Szymborska? Gịnị ka o dere? Gini mere eji ama gi ma obodo gi ma mba ofesi? N'ime ihe ndị a niile, na ọtụtụ ndị ọzọ, bụ ihe ị ga-amata taa.
1 Ọnye na-bụ Wislawa Szymborska
2 Wislawa Szymborska na akwụkwọ
3 Kedụ akwụkwọ ndị o dere
Ọnye na-bụ Wislawa Szymborska
Isi mmalite: zendalibros
Wislawa Szymborska abụghị aha ya n'ezie. Aha onye a na-ede uri aha bu Maria Wislawa Anna Szymborska. Amuru ya na Prowent na 1923 (ugbua obu ihe anyi mara dika Kórnik, na Poland).
Nna ya bụ onye isi achịkọtara Count Wladyslaw Zamoyski, onye nwe obodo Kórnik, mgbe ọ nwụrụ ka otu afọ gachara, ihe ọ pụtara bụ na ezinụlọ ahụ gafere Torun, ebe Wislawa Szymborska toro.
Ọ dị ezigbo mma, nke mere na, mgbe ọ dị afọ ise, mgbe ọ na-agụ akwụkwọ n'ụlọ akwụkwọ, ọ malitere ide abụ. A ghaghi ikwu na onye obula no na ezi na ulo ya nwere aguu akwukwo, ha na-agu ma na-ese okwu banyere akwukwo. E wezụga nke ahụ, o nwere "ihe nrite". O bukwa na ahuru nke Wislawa Szymborska nile gabigara n’aka nna ya, ma oburu na o masiri ha, o nye ya nkpuru ego dika ihe nrite, nke o ji were zuta ihe obula o choro.
Na 1931, ha kwagara ọzọ, n'agbanyeghị na ọ debara aha na ụlọ akwụkwọ ndị nọn dị na Krakow, ọ gụghị akwụkwọ ebe ahụ. N'oge a otu n'ime ihe mkpasasị nke gosipụtara ya bụ, n'enweghị obi abụọ, ọnwụ nna ya. Ezinụlọ ahụ akwaghị ọzọ, mana nọrọ na Krakow ebe, mgbe afọ ole na ole gachara, ya na Agha Worldwa nke Abụọ, na 1940, ha tara ahụhụ ndị German na Poland.
N'ihi nke a, Ndị okporo osisi enweghị ike ịga ụlọ akwụkwọ gọọmentị. Mana nke a akwụsịghị Wislawa Szymborska bụ onye kpebiri ịga n'ihu na-agụ akwụkwọ ya ma mee nke a n'ụlọ akwụkwọ nzuzo, na Wawel Castle. N'ihi ya, na 1941 ọ gụsịrị akwụkwọ sekọndrị.
Afọ abụọ mgbe nke ahụ gasịrị, ọ malitere ịrụ ọrụ n'okporo ụzọ ụgbọ oloko, si otú a na-ezere ịbụ onye a chụgara Germany maka ọrụ mmanye. Nakwa n'oge a, ọ nọrọ oge ndị ọzọ ọ na-eme ihe atụ maka akwụkwọ ọgụgụ Bekee na ide ma obere akụkọ na abụ.
Njedebe nke Agha Worldwa nke Abụọ nyeere Wislawa Szymborska aka ịbanye na Mahadum Jagiellonian dị na Krakow, ebe ọ họọrọ akwụkwọ Polish ma mesịa gbanwee ọrụ na nkà mmụta mmekọrịta ọha na eze. N'agbanyeghị nke a, ọ nweghị ike ịkwụsị agụmakwụkwọ ya, mana ọ kwụsịrị na 1948.
Otú ọ dị, n’oge nwa akwụkwọ ahụ dị mkpirikpi, o bipụtara ụfọdụ uri n’akwụkwọ akụkọ na magazin.
Wislawa Szymborska na akwụkwọ
Isi mmalite: abc
Wislawa Szymborska nke mbụ e bipụtara bụ na 1945, na mgbakwunye akwụkwọ edemede kwa ụbọchị Dziennik Polski. Aha ya, achọrọ m okwu ahụ (Szukam slowa). Ma nke ahụ apụtaghị na izizi ya, kamakwa na ha mepere ụzọ nke uri ya na akwụkwọ akụkọ na mgbasa ozi mpaghara.
Na 1948, mgbe ọ kwụsịrị mahadum maka na ọ nweghị ego, ọ malitere ịrụ ọrụ dịka odeakwụkwọ maka akwụkwọ mmuta mmụta, ọkachasị maka akwụkwọ akụkọ nyere ya ohere mbụ ya, Dziennik Polski. Ma, n'otu oge ahụ ọ bụ odeakwụkwọ, ọ rụkwara ọrụ dị ka onye na-ese ihe na onye abụ, ebe ọ gara n'ihu na-ebipụta abụ.
N'ezie, na 1949, o nweela nchịkọta abụ ya mbụ.
N’oge na-adịghị anya, na ‘52, ọ wepụtara nchịkọta uri ọzọ, Dlatego zyjemy (Ọ bụ ya mere anyị ji ebi ndụ), ọnụ ọgụgụ ka ukwuu n’ime ha juputara n’echiche ndọrọ ndọrọ ọchịchị ya. Ma ọ bụ na n'oge ahụ ọ ghọrọ onye otu nke ndị ọrụ Polish Workers Party, nwere nnukwu mmetụta nke ọhaneze na ọ tụgharịrị ọ bụghị naanị na uri uri ahụ, kamakwa na nke na-esote, na 1954, Pytania zadawane sobie (Ajụjụ a jụrụ onwe ya).
Ugbu a, n'agbanyeghị na ọ bụ onye na-elekọta mmadụ, afọ atọ ka e mesịrị, o bipụtara mkpokọta abụ ọhụrụ, Walanie do Yet (Call to the Yeti) nke o gosipụtara doro anya mmechuihu ma gbajie echiche ndị Kọmunist, na otu o si gbanwere n’echiche ya, na afọ ojuju ya n’ụdị ụdị ndọrọ ndọrọ ọchịchị a.
Na mgbakwunye, o gosipụtara nchegbu maka mmadụ, ọkachasị Stalinism, ọbụnadị ịrara uri uri nye Stalin ebe o jiri ya tụnyere onye snow na-asọ oyi (Yeti). Ruo n'oge ahụ ọ hapụrụ ọchịchị Kọmunist na mmekọrịta ọhaneze na ọ jụrụ ọrụ abụọ ahụ ọ bipụtara na achọghị ịnụ site na ha ọzọ.
Kedụ akwụkwọ ndị o dere
Kwesịrị iburu n'uche nke ahụ Wislawa Szymborska malitere ide site na afọ 5. E kwuru na ọ hapụrụ ihe karịrị narị abụ atọ na ise. N'ime akwụkwọ, o dere ihe karịrị 350 uri na prose. Mana n'agbanyeghị na anyị bara ụba, anyị enweghị ike ịsị na ọ bụ ama ama ụwa, n'eziokwu ọ bụghị otu ahụ. Ha maara ya ntakịrị na mba ya, mana ọ bụghị n'èzí. Dika amara ya nke oma, obu na oru ya ndi ozo: nkatọ na akwukwo.
Ya mere mgbe n’afọ 1996 ka enyechara ya Nobel Prize for Literature, Wislawa Szymborska bụ ihe ịtụnanya, ma ya ma ndị nile na-amabeghị ya ruo oge ahụ. N'ezie, ọ bụghị naanị ya ka e nyere onyinye. Na mbụ ọ nweela ndị ọzọ, dịka Nrite nke Ministri Omenala nke Poland, nke enyere na 1963; Onyinye Goethe, na 1991; ma ọ bụ Nrite Ahịa na nnabata dị ka Dọkịta Asọpụrụ Iwu nke Mahadum Adam Mickiewicz nke Poznan, na 1995.
1996 bụụrụ ya nnukwu afọ, ọ bụghị naanị n'ihi Nrite Nobel, kamakwa n'ihi na e nyere ya PEN Club Prize nke Poland.
Afọ ole na ole ka e mesịrị, na 2011, ọ natara otu n'ime onyinye ọhụrụ ya, Orla Bialego Order (Order nke White Eagle), nsọpụrụ kachasị elu e nwetara na Poland.
Na Spain ị nwere ike ịchọta akụkụ nke ọrụ ya sụgharịrị, ụfọdụ akwụkwọ bụ:
Odida obodo na ọka nke ájá.
Isi ihe abụọ.
Ọnụ ọgụgụ dị ukwuu.
Obi ụtọ na obi ụtọ na uri ndị ọzọ.
Akwụkwọ ozi edemede.
N'ikpeazụ, anyị ga-ahapụrụ gị otu n’ime abụ uri Wislawa Szymborska.
Nkwuputa site n'okwu
ONYE ọ bụla ma ebe ọ nọ
nke ọmịiko (echiche nke mkpụrụ obi),
"Mee ka ọ mara!" , Ya dọọ aka ná ntị!
Ka m buo ya n’olu dara ụda
agba egwu dika m tufuru uche m
jubilant n'okpuru ike willow
Ruo mgbe ebighi ebi na njedebe nke anya mmiri.
Ana m akuzi imechi ọnụ
na usoro iche echiche
nke mbara igwe
jaws nke sinantropus,
M SITE ịhụnanya.
Na ahihia gara aga,
mgbe, a na-asa ya na anyanwụ ruo n'olu,
ị dinara mgbe ikuku na-agba egwu
(nna ukwu nke agba ntutu gị).
Onyinye na "Nrọ".
nye ndị agadi nọ n’ebe a na-elekọta ndị agadi
nwụọ. Jeenụ ozi
bia n’enweghi ntunye
ọ dịghị e dere ede.
A ga-ebibi akwụkwọ ndị ahụ
Maka nkwa di m
—Na na ọ ghọgburu gị na agba
nke ndị mmadụ juru n'ụwa, ya na ọgbaghara,
ya na windo si na windo, na nkịta
na ị gaghị anọ naanị gị
na chi ojiji, gbachi nkịtị ma ghara iku ume.
Enweghị m ike ịza.
Abalị, nwaanyị di ya nwụrụ nke ụbọchị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » Ndị edemede » Wislawa Szymborska
Noel perez dijo
Eso m n ’otu n’ime ndị chọpụtara ya n’oge na-adịghị anya, kwụsịkwa ịbụ otu n’ime ndị na-abụ abụ ọkacha mmasị m. Ọtụtụ bụ abụ ndị mere ka m maa jijiji, mana nke mbụ mere m obi abụọ bụ The Pi Pi.
Zaghachi Noel Pérez
Daniel Martín Serrano. Ajụjụ ọnụ nke onye edemede nke Insomnia
Esteban González Pons, onye edemede nke Ellas. Ajụjụ ọnụ